अवैध खेल 'सट्टेबाजी'मा आईजीपी खनालको ध्यान तानिएला त ? | Citizen Post News
अवैध खेल 'सट्टेबाजी'मा आईजीपी खनालको ध्यान तानिएला त ?
२०७५ बैशाख ४ गते ०९:५३
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल हुँदा नेपालमा भने अर्बौ रूपैयाँको जुवा हुने गरेको छ । जसलाई बुकी अर्थात सट्टेबाजीको नाम दिइएको छ । आईपीएल खेलमा बाजी थाप्ने नेपालीको जमात भने दिनप्रतिदन बढ्दै गएको छ । स्रोतका अनुसार आईपीएलमा हुने सट्टेबाजीमा नेपालबाट मात्रै बार्षिक ५ अर्ब रूपैंयाँ बिदेशिने गरेको छ ।
स्रोत भन्छ, 'प्रत्येक खेलमा राखिने सट्टेबाजीमा नेपाली रूपैंयाँ भारत जाने गरेको छ । बुकी आइपीएलका नाममा हुने जुवा अथवा सट्टेबाजी हो । यस्तो सट्टेबाजीका लागि भारतीय एक गिरोहका सदस्य नागराज नामले कुख्यात अमित अग्रवाल नेपालमा सक्रिय रहेका छन् ।' तत्कालिन समयमा महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी हालका प्रहरी आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल नागराजको बिषयमा प्रमाण संङ्कलन गर्न लागेपछि उनले नेपाल छाडेर गोवाबाट धन्दा चलाउन थालेका थिए । महाशाखाबाट खनालको सरूवा भएसँगै उनी पुनः नेपाल छिरेका थिए ।
अण्डरवल्र्ड डन दाउद इब्राहिमले सुरू गरेको सट्टेबाजी नेपालका प्रमुख एजेन्ट नागराज भएको जानकारहरू बताउँछन् । दुई बर्ष यता सट्टेबाजीको बिषयमा प्रहरीले बिशेष चासो राख्न थालेपछि त्यस्ता एजेन्टहरुले अहिले भाइबर, ईन्टरनेटका अन्य उपकरणहरू र गोप्य व्यक्तिमार्फत जुवामा खेलाउँदै आएका छन् ।
नेपालमा सट्टेबाजीकै लागि कम्तिमा पनि ५ सय भन्दाबढि व्यक्ति परिचालित गरिएको स्रोतले जनाएको छ । काठमाडौं, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरवा, नेपालगंज, चितवन, मोरङ, बिराटनगर सट्टेबाजीका प्रमुख बजार हुन् । यो खेलमा ‘५ हजारदेखि ५ करोडसम्मको सट्टेबाजी हुँदै आएको छ । अहिले गोप्यताको आधारमा यो कामले निरन्तरता पाएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सट्टेबाजी गराउन ५ सय एजेन्ट नेपालका बिभिन्न शहरमा सक्रिय छन् ।’ जसलाई नागराजले परिचालन गर्दै आएका छन् ।
‘कसले सञ्चालन गर्छ भन्ने तथ्य थाहा नपाए पनि प्रत्येक खेलमा ३० देखि ४० हजारसम्म लगानी गर्छु कुनैमा जितिन्छ कुनैमा हारिन्छ ’, सट्टेबाजीमा सहभागी एक युवाले भने, ‘यस्तो खेलको बारेमा हामीले भन्न मिल्दैन । इन्टरनेट, एसएमएस र फोनका माध्यमले पनि सट्टेबाजीको खेल हुन्छ । यसमा सबैभन्दा बढि विश्वास राख्नुपर्ने भएकाले सर्त पनि विश्वासका आधारमा नै तय हुन्छ ।’
को हुन् नागराज ?
सट्टेबाजीका लागि नेपालमा सञ्जाल विस्तार गरी नागराजको उपनामले चिनिने व्यक्ति हुन्-अमित अग्रवाल । उनी केही महिनादेखि भारतको गोवामा लुक्दै आएका थिए । अनाधिकृत रूपमा रकम जम्मा गरी भारतीय बजारमा र्पुयाउने नागराजको अन्य कुनै व्यापार व्यवसाय छैन । माहाराजगञ्ज, बाँसबारीमा उनको घर रहेको छ ।
बालुवाटार प्रधानमन्त्री कार्यालय पछाडि एक रोपनी जग्गाको घडेरीलगायत अन्य ठाँउमा करोडौ रूपैंयाको सम्पत्ति नागराजले जोडेका छन् । प्रहरीको निशानाबाट बच्न नागराजले जुवा खेलाउने प्रणाली नै परिवर्तन गरेका छन् । अहिले उनले आफ्नै एकाउन्ट खोलेर जुवा खेलाउन थालेका हुन । ‘जुन बाहिर लिक हुँदैन, प्रहरीले पक्राउ गरि हाले पनि प्रमाण हात लाग्न सम्भव छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
जसमा उनले खेल हेरेर ३ देखि ५ प्रतिशत कमिशन पाउने गरेको स्रोतको दावी छ । जसमा वार्षिक नागराजले १५ करोड माथि कुम्ल्याउने गरेका छन् ।नेपालमा बुकी खेलाउने मध्ये नागराज अग्रस्थानमा छन् भने सेठ्ठी भनिने राकेश अग्रवाल, रमेश अयोग्य नेपालका प्रमूख बुकीका एजेन्ट हुन् । यि सबै भारतीय नागरिक हुन् । क्यासिनोमा बसेर जुवा खेलाउँदै आएका उनीहरुमाथि प्रहरीले निगरानी राख्न थालेपनि अहिले घरबाटै जुवा खेलाउदै आएका खबर जनप्रहारमा छ ।